Pane zvinhu zvakasiyana-siyana Windows 10 mapurogiramu aungashandisa kuvandudza inzwi rako uye munyaya ino tinoda kusimbisa zvimwe zvepamusoro.
Tichave tichitarisa zvimwe zvekuenzanisa zvakanakisisa, zvimwe zvepurogiramu yakanakisisa yevhisi yakapoteredza, uye dzimwe nzira kune Windows 10 mixer.
Uyewo, iva nechokwadi chekutarisa shamwari yedu nyaya pamusoro payo nzira dzakanakisisa dzekunatsiridza kuratidza maitiro mukati Windows 10.
Nekuenzanisa, iwe unogona kuchinja purogiramu yezwi rako. Kuenzanidza kunowanzoshandiswa kumimhanzi kana kuteerera mafirimu kubatsira kubatsira vana kana kupa zvimwe zvinhu.
Nezvizvi zvekufananidzira, unogona kusarudza presets inokodzera mamwe mhando dzemimhanzi kana kuumba maitiro ako chaiwo ekufananidza. Takasarudza mbiri mbiri dzakanyatsokodzera Windows 10 pazasi.
FxSound Enhancer zvirevo website yavo kuti vanogona kukudziridza hutano hwemhanzi yako. Ndinogona kutaura kuti kana FxSound Enhancer isingakwanisi kuita $ 20 pair of earphones inonzwika sa $ 200 pair, vanogona kushandisa presets yeEQ kuvandudza ruzivo rwekuteerera kwezviitiko zvakawanda zvekushandisa.
Kutanga, ndaida kutsanangura kuti FxSound Enhancer inoshanda zvakanaka uye yakanyatsofamba yose Windows 10 OS. Ichi ndicho chinhu icho vazhinji vanofananidza vanorwisana nacho, pane chimwe chikonzero, saka icho chinhu chikuru chekutanga.
Zvinonyanya, kana iwe uchishandisa FxSound Enhancer, ichawedzera eE automatic preset kune yako audio iyo, pane dzakawanda, inovandudza ruzivo rwako rwekuterera kana uri kushandisa zvidhori zvidhori zvekutengesa.
Ndiyo imwe nzira yakanakisisa yekuchera $ 200-500 pane imwe mbiri ye headphones uye DAC yakakodzera. IEQ presets yakawanda, iyo yakanaka kana iwe uchida kuwana ruzivo rwakanakisisa yekuteerera kune rumwe rudzi rwemimhanzi. Iwe unogonawo kuvaka yako presets.
FxSound Enhancer inoshandisa nzira inofadza yekusika 'decompression' kuti uwedzere kujekesa kune inzwi raunoteerera. Kana iwe uchiteerera mimhanzi kuYouTube kana kurarama mapurogiramu ekudhinda nekudzvinyirira, izvi zvinokonzera kusiyana kukuru.
Ini ndingati Spotify's own Extreme quality kana Tidal's Hifi kushambadzira kubhadhara ingadai iri nzira yakanakisisa, zvisinei.
FxSound Pro haisi yakasununguka, iyo ndiyo inoparadzaniswa nayo kubva pane zvatinotevera pasi apa. Kunyoreswa kwoupenyu nguva dzose kunodhura $ 49.99, asi unogona kuwana 7 zuva rekuedzwa kusununguka kuti uedze zvinhu.
Equalizer APO NeKuyananisa Rugare - Vakasununguka
Kana iwe uchida kusununguka, unhu hwakanaka uye kuiswa nyore, ndingadai ndichiri kuratidza FxSound Enhancer kubva kumusoro. Kana iwe usingafungi kuti uwane zvigadzirwa zvako zvouchenjeri zviduku zvishoma, Equalizer APO inzira yakanakisisa, uye yakasununguka uye yakasununguka.
Kuzvigadzirisa kunotora nguva uye iwe uchada kuverenga kuburikidza nemafaira ekutsigira zvakanyatsonaka. Unofanirwa kuisa Equalizer APO uye wobva wada Peace Interface. Izvo zviviri zvakabatana zvinokupa simba rakakura rekuona audio pamwe chete nehuwandu hune interface.
NeChipupuriro Chorugare, iwe unopiwa kuraira kwakanyanya pamusoro pokusika iwe pachako. Kunewo mamwe mazano ekugadzirisa maitiro akaisvonaka maunenge uchisarudza kubva kwauri. Unhu hwekuteerera hwakanaka uye kana uchingotora zvinhu, zvose zvinomhanya zvakanaka Windows 10.
Unogona kuwana iyo Equalizer APO pano uye Peace graphical interface pano.
Best Yakakomberedza Sound Software ye Windows 10
Neine purogiramu yepurosoft software, iwe unogona kuchinja maruva makoti e-stereo muchiitiko chakazara chitsva.
Ruzhinji rwakanaka rwakapoteredza ruzha ruchafananidza kugadzirwa kwechokwadi kwakapoteredza, izvo zvinoreva kuti uchakwanisa kunzwa manzwi mumitambo yemavhidhiyo nenzira imwecheteyo yavanobva, kana kuti iwe unogona kuva nezvimwe zvakanyatsoona zvekuona mafirimu mafirimu.
Pasi pane zvitatu zvakakura zvakapoteredza shanduro software zvayo Windows 10.
Razer Surround - Free kana $ 19.99
Razer Surround inonzi 7.1 surround sound software yakagadzirirwa kuti ipe nzvimbo yakakwana yepamusoro kune chero mbiri ye headphones kana earphone. Izvo software yepasi yakasununguka asi iwe unogona kuwana purogiramu yepro version ye $ 19.99 imwe nguva yokubhadhara.
Kuuya kubva kuRazer team, zvakajeka pakarepo kuti mhepo yakapoteredza inopa yakagadzirirwa zvakananga kumitambo. Saka, ruzivo mumitambo yemavhidhiyo rinotarisirwa zvakanaka. Kutamba mitambo yakafanana neHighfield 5 kana Black Ops 4 itsva yeBlackout mode inoshanda chaizvo.
Mitambo miviri ine unyanzvi hunoshamisa hwehuchenjeri, asi 7.1 Razer Surround software inoitora kune imwe yero. Mumitambo apo inzwi rakapoteredza rinobatsira pakutsvaga imwe mhanya-mhanya, Razer Surround inofadza, zvakare.
Kushandisa Razer Surround zvakare zvakare nyore uye nekutenda kune zvishoma hazvidikanwi kana uchida kuvhara mharidzo chaiyo - chete kamwe chete pane bhatani. Mune maonero angu, Razer Surround ndiyo yakanakisisa nzira yevatambi.
Dolby Atmos inogona kuwanikwa kuburikidza nekukanda purogiramu yeDolby Access kubva kuMicrosoft Store. Kuti uwane Dolby Atmos, unofanirwawo kushandisa $ 14.99 mushure mekuisa App Access.
Kuburikidza neApp app inonzwa zvishoma zvishoma uye zvinowanzova nhamo kune izvo Razer aifanira kupa. Pakupedzisira, inzwi rakapoteredza rakanaka, asi rinoratidzika kuti rinonyanya kunetseka pamusoro-soro iwe unayo.
Kana iwe une maviri akanaka e headphones, zvakananga kuvharidza headphones, ruzha rwakakomberedza kubva kuDolby Atmos runogona kushanda zvakanaka zvinoshamisa. Zvakakosha kuwedzera kubhabhatidza mumhepo mumavhidhiyo nemavhidhiyo, asi zvinogona kurohwa kana kusakirwa zvichienderana nekutaurira sei inzwi rauri kutarisa rakabudiswa.
Zviri pachena, kana iwe unenge wakakomberedzwa nhepfenyuro yakagadzirisa yakananga, Dolby Atmos hapana mubvunzo kusarudzwa kwakanakisisa. Dolby Atmos ndeyepamusoro pemutambo pazvinosvika kumhepo yakapoteredza.
Pakupedzisira, Dolby Atmos inoshandiswa zvinobatsira, kunyanya kana une nzvimbo chaiyo yekugadzirisa inonzwika. Kana ukashandisa headphones, inongova yechipfuva kana ichiitika kana ichiita mutsauko kana kwete, zvichienderana nezvamuri kuishandisa.
Windows Sonic yeHedifoni - Yemahara
Windows 10 inotova neruzha rwekutenderedza uye mikana iwe ungangodaro usina kumboziva. Microsoft yakawedzera chinyararire Windows Sonic yeHedifoni muVagadziri Gadziriso uye ndokupinza mubharaki rebasa.
Kuti uite Windows Spatial kurira, tinya kurudyi iyo volume mixer icon pane bharaki, ipapo tora Pakati pezwi (Off). Iwe pachako uchange uine sarudzo yekusarudza Windows Sonic yemahedhifoni.
Mune ruzivo rwangu, Windows Sonic yeHeadphones yaive yakangofanana neDolby Atmos. Muchokwadi, zvaive zvakandiomera kusiyanisa mutsauko.
Kana iwe uchitsvaga chaiyo yakatenderedza kurira mahara, Windows chipiro chako chinogona kunge chiri chakanyanya kuwanikwa. Kune chaiyo yakakomberedza ruzha mutauri system, zvakadaro, Atmos inogona kunge iri nani.
Best Best Mixer Alternative For Windows 10
Mutemo Windows 10 audio mixer ishoma, saka taifunga kuti tinogona kuisa dzimwe nzira mbiri dzinogona kukupa simba rakakwana pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwemapurogiramu ega ega. Iwe unogona kushandisawo mazano mairi pasi apa kuti utarise mutinhi wepikicha mbiri panguva imwe chete, uye sarudza kuti zvipi zvishandise zvinoshandisa ipi iyo faira.
EarTrumpet - Free
EarTrumpet yakatarwa seimwe yepamusoro audio control apps apps Windows 10. Panzvimbo pekuwedzera huwandu hutsva hutsva hunoita kuti uende nenzira yako, EarTrumpet inowedzera zvakanyanya pane zviripo Windows 10 audio mixer UI.
Ne EarTrumpet, unogona kudzora wega wega yega yega purogiramu yakazaruka, uye iwe unogona kukurumidza kushandura maitiro ekutamba. Iwe unokwanisawo kugadzira zvigadzirwa zvese zvemavhidhiyo zvisingatauri zvezvirongwa zvakasiyana.
Chandinonyanya kufarira pamusoro peT Earpet ndechekuti inosanganisa zvakanaka Windows 10 - inoratidzika sechirongwa chepamutemo kune mutinhiriri wechirangaridzo kunze kwekusimudzira purogiramu. Chii chakanaka pamusoro peElectTrumpet ndechekuti zvakare isununguka. Unogona kuzviwana muMicrosoft Store.
Voicemeeter - Free
VoiceMeeter inonyanya kukwira kubva kuTlebeTrumpet, asi zvimwe zvinyorwa zvinongobatsira chaizvo kune avo vanodikanwa kuti vaite zvakanaka mitsara imwe chete yemazwi.
Ne VoiceMeeter, unogona kuchinja EQ yezvipikicha zvakawanda zvepamhanzi panguva imwechete uye uchinje apo inotaurirwa. Semuenzaniso, unogona kunyora pakombiyuta audio asi kwete inzwi rako, kana zvimwewo.
Kana iwe uchikwira pamapuratiki akaita seTwitch kana YouTube, unogona kuita kuti mitambo yako yekutamba uye inzwi inotorwa, asi izwi rinobva kune shamwari dzako mubasa rako rekukurukura harisi.
Kune mikana yakawanda neVoicemeeter, kunyange zvazvo inotora kuverenga kwakaoma kana Youtube tutorial kutarisa kuti udzidze kuidzidzira. Iwe unogona kuwana Voicemeeter software pasina VB-Audio.
Pane chero mapurogiramu emazano anowanikwa munyaya ino inofarira iwe here? Rega ndizive kana une mibvunzo pamusoro pe software yandakaita. Enjoy!
The post Best Windows 10 Software for Better Audio yakatanga kutanga Online Tech Tips.
Razer Opus Ongororo - Inonyaradza, Inogara-Wireless Wemoya Mafuro ne ANC
Chii chinonzi Dolby Atmos uye ndevapi vatauri vaunoda?
Vagashiri veAV akanakisa: Iyo yakazara yakazara Dolby Atmos, DTS: X uye multiroom AV inogamuchira yaunogona kutenga
Yakanakisa soundbar UK 2020: Iyo yekumusoro mabara uye maungira ekukurudzira TV yako odhiyo
Ongorora: Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ​​ndiyo yakanakisa 65% KB izvozvi